आज बुधबार कस्तो छ तपाईको दिन? - Sankalpa Khabar
आज बुधबार कस्तो छ तपाईको दिन?
२५ चैत्र ०६:१८
२०७७ चैत्र २५ गते, बुधवार। चैत्र कृष्णपक्ष एकादशी तिथि
सुन्दर पहिरनका साथ व्यक्तित्व निखार्ने अवसर जुट्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ। तर सहयोगीहरूको भरपर्दा पछि परिएला। आगन्तुकहरूले काममा अवरोध पुर्याउन सक्छन्। आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। अवसर प्राप्त भए पनि भूलवश काममा बाधा होला। साँझतिर प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ।
सुरुमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। अरूको विश्वासमा पर्दा धोका हुन सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्राको सम्भावना देखिन्छ। साँझदेखि परिस्थिति अनुकूल बन्नाले महत्त्वाकांक्षी काम गर्न सफल भइनेछ। तारिफयोग्य कामले प्रशंसक बढ्नेछन्। ज्ञान, कला र व्यक्तित्व निखार्ने समय छ।
२८ चैत्र ०६:३६